» सर्वाेत्तमको बुक बिल्डिङः प्रति कित्ता ६७५ रुपैयाँ मूल्य, तीन महिनाभित्र ३५ प्रतिशत लाभांश
सर्वाेत्तमको बुक बिल्डिङः प्रति कित्ता ६७५ रुपैयाँ मूल्य, तीन महिनाभित्र ३५ प्रतिशत लाभांश
२०७७ चैत्र ५, बिहीबार ११:५२
काठमाडौं । बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट पहिलो सार्वजनिक निष्काशन गर्ने सर्वाेत्तम सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि प्रति कित्ता ६७५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधीको उपस्थितिमा कम्पनीले बिक्रि प्रबन्धकहरुसँग सम्झौता गर्दै बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्काशनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो
सर्वाेत्तमको आईपीओ निष्काशनको जिम्मा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल र सहायक कम्पनीहरुमा एनआईबीएल एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटलले लिएका छन् । कम्पनीलाई इक्रा नेपालले बीबीबी प्लस रेटिङ दिएको छ, जसले कम्पनीको अवस्था औषत भन्दा राम्रो रहेछ जनाउँछ ।
कति निष्काशनः कसलाई कति ?
सर्बोत्तम सिमेन्टले नेपालको सार्वजनिक निष्काशन इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट ६० लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्दैछ ।
कुल निष्काशनमध्ये संस्थागत लगानीकर्तालाई २४ लाख कित्ता, स्थानीय जिल्ला बासीलाई ८ लाख कित्ता छुट्याइएको छ । कम्पनीका कर्मचारी तथा अन्य सर्वसाधारणका लागि भने २८ लाख कित्ता छुट्याइएको छ ।
कम्पनीले संस्थागत तर्फका लगानीकर्तालाई प्रतिसेयर मूल्य ७५० रुपैयाँ प्रूताव गरेको छ । त्यस्तै सर्वसाधारणलाई भने १० प्रतिशत सहुलियतमा अर्थात ६७५ रुपैयाँमा एक कित्ता सेयर बेच्ने योजना कम्पनीको छ ।
तीन महिनाभित्रै ३५ प्रतिशत लाभांश
कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गरेको तीन महिनाभित्रै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने बताईसकेको छ । कम्पनीले आफ्नो रिजर्भबाट० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने बताएको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।
कस्तो छ कम्पनी ?
सर्वोत्तम सिमेन्टको विगत तीन वर्षदेखिको प्रति सेयर आम्दानी ५२ रुपैयाँ छ भने आगामी तीन वर्षसम्म त्यस्तो आम्दानी ४५ रुपैयाँ माथि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ सर्वोत्तमले बार्षिक औषत एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको बताएको छ ।
सर्बोत्तम सिमेन्ट बिष्णु प्रसाद न्यौपानेको नेत्रित्वमा रहेको व्यावसायिक घराना सौरभ ग्रुपले संचालन गरेको उद्योग हो । यो उद्योग बिष्णु प्रसाद न्यौपाने सहित ७ जना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले स्थापना गरेका हुन् ।
बि.स. २०७१ सालबाट क्लिनकर उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले २०७३ सालमा सिमेन्टको उत्पादन थालेको हो ।
बि.स. २०७६ साल श्रावण महिनाबाट कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण भएको हो ।
कम्पनीको उत्पादन क्षमता प्रति दिन ३ हजार टन क्लिनकर तथा २८ हजार बोरा सिमेन्ट रहेको छ । २०७७ माघबाट भने क्षमता वृद्धि भई ६० हजार बोरा प्रति दिन पुगेको छ ।
कम्पनीले ५ सय भन्दा बढी कामदारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ भने देशभर ६ सय भन्दा बढी व्यावसायिक डिलर संजाल रहेको छ ।
कम्पनीले आगामी ३ बर्ष सम्मको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट पाएको छ ।
राजस्व अनुसन्धानका नयाँ महानिर्देशक एक्सनमा, २९ जनाको गिरोहविरूद्ध एकैपल्ट चलाए करछलीको मुद्दा
सान्जेन जलविद्युतले पायो ३६ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति